GỤỌ NKE Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Mizo Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Samoan Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese
Ọ BỤ ụbọchị gbanwere ọdịnihu ihe a kpọrọ mmadụ kpam kpam n’ụzọ ga-abara ha uru ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ụbọchị ọ bụla ọzọ gara aga nke nweworo mmetụta dị otú ahụ n’ọdịnihu nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ọ bụ ụbọchị Jizọs mezuru ihe nile ọ bịara n’ụwa ime. N’ịbụ onye a kpọgidere n’osisi ịta ahụhụ, ka ọ na-ekubi ume, o ji oké olu kwuo, sị: “E mechawo ya!” (Jọn 19:30) N’ihi gịnị ka Jizọs ji bịa?
“Nwa nke mmadụ bịara,” ka Bible na-ekwu, “ọ bụghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi nakwa ka o nye mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ.” (Matiu 20:28) Jizọs nyere mkpụrụ obi ya, ma ọ bụ ndụ ya, ka ihe a kpọrọ mmadụ wee nwee ike ịbụ ndị a napụtara n’aka mmehie e ketara eketa na ọnwụ. Ee, “Chineke hụrụ ụwa n’anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, ka e wee ghara ibibi onye ọ bụla nke na-egosipụta okwukwe na ya, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:16) Lee onyinye dị oké ọnụ ahịa àjà Jizọs bụ!
Ụbọchị Jizọs nwụrụ bụ ụbọchị kwesịrị ncheta n’ihi ihe ọzọkwa. N’ụbọchị ahụ, Ọkpara Chineke kụziiri ndịozi ya ihe ndị bara uru ga-enyere ha aka ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi. Lee ka okwu ndị ikpeazụ o kwuru na-aghaghị isiwo metụ ndị ahụ na-eso ụzọ ya n’obi! Olee ihe ndị ọ kụziri? Olee otú anyị pụrụ isi rite uru n’ihe Jizọs kụziiri ha? A ga-aza ajụjụ ndị a n’isiokwu na-esonụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ụbọchị Kwesịrị Ncheta